Central Bank sells USD15 million inaday to bring down the dollar rate | Myanmar Business Today
HomeBusinessCentral Bank sells USD15 million inaday to bring down the...
The Central Bank of Myanmar has auctioned USD 15 million inaday for the first time in September at the rate of MMK 1,750 per dollar while the rate in the informal market was at MMK1,900-2,000 per dollar.
The dollar rate against Myanmar Kyat keeps breaking records since March,amonth after the coup.
The currency exchange dealers said that this is the result of Myanmar Kyat depreciation, lower exports, and less foreign direct investment while people’s confidence in Myanmar Kyat and the banking system has plummeted.
To remedy the weak Myanmar Kyat, the Central Bank has been pumping millions of dollars into the domestic currency market in an attempt to bring down the strong dollar rate against Myanmar Kyat. However, Myanmar Kyat’s value continues to decline as the country’s stability deteriorates.
The Central Bank of Myanmar auctioned USD6.8 million in February, USD 24 million in April, USD 12 million in June, USD 39 million in July, and USD28 million in August.
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က စက်တင်ဘာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းကို တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ် ၁၇၅၀ နှုန်းဖြင့် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ရောင်းချခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင် ပြင်ပဒေါ်လာ ပေါက်ဈေးမှာ တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၉၀၀ ကျပ်မှ ၂၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်အထိ ဈေးပေါက်ခဲ့သည်။
ဒေါ်လာဈေးများမှာ အာဏာသိမ်းပြီး နောက်တစ်လဖြစ်သည့် မတ်လမှစတင်ကာ စံချိန်တင် မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။
ငွေလဲလှယ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များကတော့ ဤသို့ ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း မြင့်တက်နေရခြင်းမှာ မြန်မာ ကျပ်ငွေ တန်ဖိုးကျဆင်းခြင်း၊ ပြည်ပပို့ကုန်နည်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်အပြင် မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် ဘဏ်စနက်အပေါ် ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်မှုကျဆင်းနေခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း မြင့်တက်နေမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ရောင်းချပေးနေသော်လည်း မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးမှာ ဆက်လက်ကျဆင်းလျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ဒသမ၈ သန်း၊ ဧပြီလအတွင်းက အမေရိကန် ေုါ်လာ ၂၄ သန်း၊ ဇွန်လအတွင်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း၊ ဇူလိုင်လအတွင်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉ သန်းနှင့် သြဂုတ်လအတွင်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈ သန်း ရောင်းချခဲ့သည်။
Previous articleAYA Bank’s cash carrier van robbed; robbers get away with money
Next articleTelenor sheds light on deployment of surveillance tech in Myanmar